बिहान चाडै कसरि उठ्ने ? - हिमाल दर्पण
बिहान चाडै कसरि उठ्ने ?
बिहान चाडै उठ्नलाई आफ्नो जीवनशैलीमा केही परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ बिहान चाडै उठ्न सके दिनभरी फ्रेस भइन्छ र दिउँसोको कामको चाप पनि कम हुन्छ । हामी धेरै मानिसहरू बिहानै उठ्न चाहान्छौँ, तर उठ्न सकिरहेका हुदैनौ बिहान चाडै उठ्नलाई निम्न उपायहरु अपनाउनु होस् :
बिहान चाडै उठ्नका लागि कम भोजन गर्नुहोस् । बेलुकीको समयमा आफूले खाएको भोजनलाई थोरै थोरै मात्रामा घटाउदै लान सकिन्छ । र केही दिनमा केवल दुध र सुपाच्य वस्तुहरू मात्रै खाने गर्नुहोस् । यसले बिहान तपाईलाई चाडै उठ्नलाई सहयोग गर्दछ ।
यदी तपाई बिहान चाडै उठ्न चाहानुहुनछ भने खाना खान वित्तिकै नसुत्न्होस् । सुत्नुभन्दा कम्तिमा ३ घण्टा अगाडि खाना खानुहोस् । सुपाच्य खाना पच्नका लागि ६ घण्टा समय लाग्दछ । तीन घण्टामा आधा खाना पचिसकेको हुन्छ । खाना पचाउन जति उर्जा लाग्छ त्यो आधा पचिसकेपछि चाडै नै तपाई गहिरो निन्द्रामा पुग्नुहुन्छ र बिहान चाडै उठ्नलाई सहयोग पुग्छ ।
भोक लाग्नु र खाना खानु अलग अलग कुरा हुन् । जिब्रो अर्थात स्वादको वसमा परेर कहिले पनि खाना नखानुहोस् । जति भोक छ त्यति मात्रै खानुहोस् ।
समयमा नै सुत्नुहोस् । तपाई राति १२÷१ बजे सुतेर बिहान ४ बजे उठ्ने आशा राख्नुहुन्छ भने मुखर्ताको कुरा गर्नुहोस् । धेरै मानिसहरू छन्, जो २ वा ४ घण्टा सुतेर पनि गुजारा चलाउनु भएको छ तर उहाँहरूले धेरै साधना गर्नुहुन्छ । त्यसैले हामीले कमसेकम ७ घण्टा सुत्नु जरुरी छ । दिउँसो अधिक काम गर्नुहुन्छ भने ७ घण्टा अनिवार्य सुत्नुहोस् । तपाई दिउँसो अधिक काम गर्नुहुन्न भने खानालाई ध्यान दिएर ६ वा ५ घण्टा मात्र सुत्न पनि सक्नुहुन्छ ।
शारीरिक र मानसिक शुद्धता कायम राख्नुहोस् । बेलुकी सुत्नुभन्दा अगाडि ब्रस गर्नुहोस् । बिहान उठ्नका लागि बेलुकी सुत्नुअघि आफ्ना सम्पूर्ण बोझहरू, तनावहरूलाई एकातिर राख्नुहोस् र फ्रि भएर सुत्नुहोस् ।
त्यस्तै, तपाईको जीवनमा के लक्ष्य छ त्यसले पनि फरक पार्दछ । तपाईले जीवनमा केही गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छैन भने, बिहान उठेर गर्ने काम नै छैन भने तपाईलाई बिहान उठ्न पनि मन लाग्दैन । जीवनमा एउटा लक्ष्य राख्नुहोस्, जसले तपाईलाई बिहानै उठ्न प्रेरणा दिन्छ । लक्ष्य मजबुत हुनका लागि संकल्प मजबुत हुनुपर्दछ ।
बिहान जरुरी काम छ भने तपाईको निन्द्रा एक घण्टा अगाडि नै खुल्नेछ । किनभने तपाईको केही छुट्ने वाला वा गुम्नेवाला छ भने तपाईलाई आफ्से आफ निन्द्राले छोड्छ । बिहानै उठ्नका लागि जरुरी काम नपर्खिनुहोस् । आफूलाई त्यस्तो काममा फसाउनुहोस् । आफ्नो जीवनमा जरुरी काम सिर्जना गर्नुहोस् ।